५ कार्तिक २०७७ | October 21, 2020
खबपुका समर्थकद्धारा ‘कमेडी चेम्पियन’को भोटिंग नतिजा सार्बजानिक गर्न माग गर्दै नाराबाजी
काठमाडौं । धादिङका हिमेस पन्तले ‘कमेडी चेम्पियन’को उपाधि जितेपछि बिबाद उत्पन्न भएको छ । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड– अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’मा पन्तले दुई जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै कमेडी चेम्पियनको उपाधि हात पारेपछि खबपुका समर्थकले भोटिंग नतिजा सार्बजानिक गर्न माग गरेका छन । चार बजेसम्म भोट भएको दाबि गर्दै उनीहरुले १२ बजे सम्मको मात्रै भोटलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । खबपुलाई हराउन धाँदली…विस्तृत समाचार »
२ चैत, काठमाडौं । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले आफ्नो १७ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन टुङ्ग्याएकी छन्। इमेज टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ताको दुई भिडियो क्लिपसहितको फेसबुक पोस्टबाट उनले जिपी तिमल्सिनासँगको १७ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन समापन गरेको सार्वजनिक गरेकी हुन्। ‘विवाह गरेको १७ वर्षपछि पनि मैले शारिरिक र मानसिक दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुको कुनै आधार छैन’, उनले सो फेसबुक पोस्टमा लेखेकी छन्। पोस्टमा उनले…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा दिदैं ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ ले आफ्नो पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन मिति स्थगित गरेको छ । सिनेमा शुक्रबार रिलिज हुने क्रममा थियो । कोरोनाभाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल पनि रहेका कारण सिनेमाको प्रदर्शन स्थगित गरिएको निर्माणपक्षले जनाएको छ । सिनेमा निर्माण कम्पनी सुदर्शन थापा प्रोडक्सनले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सिनेमा फागुन ३० गतेबाट प्रदर्शनमा नआउने जानकारी दिएको छ । कोरोनाभाइरसको…विस्तृत समाचार »
प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्दै आँचल शर्मा
काठमाडौं । अभिनेत्री आँचल शर्मा आज वैवाहिक जीवनमा बाँधिदै छिन् । उनको वैवाहिक समारोह अहिले काठमाडौंमा चलिरहेको छ । विवाहको स्थान भने अहिले गोप्य राखिएको छ । उनले प्रेमी डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन् । आँचल र उदिपको विवाहमा दुबैतर्फका सिमित सदस्यको मात्र उपस्थिति रहेको बुझिएको छ । आँचल र उदिपको बिहे अगाडि संगीत समारोह, मेहेन्दी समारोह समेत आयोजना गरेका थिए । मेहेन्दी…विस्तृत समाचार »
२८ फागुन, काठमाडौं । नेपालको एक मात्र चर्चित कमेडी सो कमेडी च्याम्पियनको ग्रान्ड फिनाले होटल सोल्टी वा आर्मी अफिसर क्लबमध्ये एकमा गर्ने भनिएको भएपनि कमेडी च्याम्पियनको ‘ग्रान्ड फिनाले’ च्याम्पियनको आफ्नै स्टुडियोमा हुने भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा नेपाल सरकारले कुनै पनि सभा, समारोह भेला हुन प्रतिबन्ध गरेकाले कमेडी च्याम्पियन ग्रान्ड फिनाले आफ्नै स्टुडियोमा गर्न लागेको निर्देशक विशाल भण्डारी बताएका छन् । ग्रान्ड…विस्तृत समाचार »
बाघी–३ मा हट अभिनेत्री दिशाको यस्तो लुक
काठमाडौं । बाघी–३ को फिल्मका गितमा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएकी हट अभिनेत्री दिशा पटानीको तस्विरहरू सार्वजनिक भएका छन् । निर्माताले सामाजिक सञ्जालमा दिशा पटानीनको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै गीत छिटै आउने जनाएका छन् । गीतको रिलिजलाई लिएर उत्साही अभिनेत्री दिशा पटानीले भनेकी छन्, यो गीत यस्तो छ, जसले तपाइलाई यसमा झुम्न बाध्य पार्नेछ । उनले सुरुमा आफूले यो गीत सुन्नासाथ उत्साही भएको बताएकी छन् । गीतको सुटिङको…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्कीको आज जन्मदिन फेब्रुअरी २७ का दिन उनको जन्म काठमाडौंमा भएको थियो । यस आधारमा आज उनी आफ्नो ३३ औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । प्रियंका कार्की एक नेपाली मोडल तथा अभिनेत्री हुन् । सुरेश दर्पण पोखरेलको ‘थ्री लभर्स’ बाट उनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कदम राखेकी हुन् । पूर्वमिस टिन प्रियंका नम्बर वन स्थानमा पुगिसकेकी नेपाली नायिका हुन् । सिनेमा र म्युजिक भिडियो…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’ को ग्रान्ड फिनाले चैत एक गते हुने भएको छ । आजसम्म नियमित सो रहेको कार्यक्रममा बीचका केही भाग प्रतिस्पर्धी र अतिथिको प्रत्तुती रहने आयोजकले जनाएको छ । ग्रान्ड फिनालेमा सुमन कोइराला, खड्गबहादुर पुन र हिमेश पन्त पुगेका छन् । सुमन र खड्गबहादुर वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट सोमा पुनः प्रवेश गरेका प्रतिस्पर्धी हुन् । ग्रान्ड फिनाले होटल…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । पछिल्लो समय खासै चर्चामा नरहेकी अभिनेत्री हुन् कटरिना कैफ । कुनै समय सलमान खानलाई धोका दिदै रनवीरसँग अफेयरमा रहेकी अभिनेत्री यतिखेर सिंगल रहेको बताउँदै आइरहेकी छिन् । रनवीरसँग ब्रेकअप भएपछि पुन सलमा खानको शरणमा पुगेकी कटरिना बलिउडमा करिअर बनाउन व्यस्त रहेकी छिन् । तर, उनलाई खासै सफलता भने मिल्न सकिरहेको छैन अब भने उनको विवाहको हल्ला व्यापक फैलिन थालेको छ । कटरिनाले मिडियासँग…विस्तृत समाचार »
१५ फागुन, काठमाडौँ । इन्गेजमेन्ट भएको दुई वर्षपछि नायिका प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीबीच आज विवाह हुँदैछ । विवाहको जानकारी दिन प्रियंका र आयुष्मान दुबैले छुट्टाछुट्टै ब्याचलर पार्टी पनि मनाएका थिए । ब्याचलर पार्टीको लागि प्रियंका आफ्ना केहि निकट साथीहरु लिएर थाईल्याण्ड उडेकी थिईन् भने आयुष्मान आफ्ना भाई आशिरमान र केहि साथीहरुसहित पोखरा पुगेका थिए । प्रियंकाले मंगलबार मेहेन्दी पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरेकी…विस्तृत समाचार »
बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष चयन
४ कात्तिक, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको शक्तिशाली संघीय परिषद अध्यक्षमा चयन भएका छन्। सोमबार र मंगलबार बसेको जसपा कार्यकारिणी समिती बैठकले भट्टराईलाई शक्तिशाली संघीय परिषद् अध्यक्षमा चयन गरेको हो। सो परिषद् केन्द्रीय समिती भन्दा पनि माथिल्लो निकाय पनि बनेको छ।
बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बन्दै
४ कात्तिक, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको बैठकले मंगलबार भट्टराईलाई परिषद्को अध्यक्षमा चयन गर्न लागेको हो । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले डा. बाबुराम भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पेस भएको र सर्वसम्मत पारित हुने बताए ।